Fanabeazam-pirenena sy PSI Madagascar : hampihena miaraka ny aretina tazo sy fivalanana | NewsMada
Fanabeazam-pirenena sy PSI Madagascar : hampihena miaraka ny aretina tazo sy fivalanana
Par Taratra sur 19/04/2016
Ho fampihenana ny tahan’ny aretina tazo sy aretim-pivalanana mahazo ny ankizy, hiara-hiasa ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny PSI Madagascar. Natao, omaly, ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana teny Anosy teo amin’ny minisitra Rabary Paul sy ny solontenan’ny PSI, Pierre Loup Lesage. Hoentanina ny mpianatra amin’ny kilasy 8ème hampiasa lay misy fanafody iarovana amin’ny kaikitry ny moka. Mora kokoa ny mampita hafatra amin’ny mpianatra ka hiitatra amin’ny ankohonana iray manontolo avy eo. Hampianarina hanana fahazarana hanasa tanana amin’ny rano madio sy savony koa ny mpianatra eny amin’ny EPP. « Hosantarina amin’ny EPP 140 amin’ny faritra Atsinanana ny tetikasa ary hitohy amin’ny sekoly hafa », hoy ny solontenan’ny PSI. Isan-taona, tsy vitsy ny ankizy marary noho ny tazo ka manapaka matetika na marerin-taona mihitsy. Enina amin’ny 10 no tsy mahavita akory ny ambaratonga voalohany, araka ny fanadihadian’ny Unicef taona 2005.
Hizara fitaovana ahafahana manasa tanana amin’ny rano madio sy savony ny PSI sady hizarana ny pilina sur’eau hanadiovana ny rano ampiasaina. Iantefan’ny asa voalohany ny EPP tsy mbola manana toeram-pamatsian-drano madio ho an’ny Dren Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Mananjary, Amoron’i Mania…
Ankoatra izay, hanao hetsika momba ny fananahana ara-pahasalamana ho an’ny tanora eny amin’ny Dren 22 ny tomponandraikitra.
Efa niara-niasa amin’ny hetsika maromaro ny roa tonta, mpianatry ny lycée 7 000 no nentanina momba ny fisorohana ny vohoka aloha loatra sy ny aretina azo avy amin’ny firaisana ny volana marsa lasa teo.